Yeyiphi Impembelelo Ngaba i-Chinese Zodiac Elements Inayo kuthi? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Yeyiphi Impembelelo Ngaba i-Chinese Zodiac Elements Inayo kuthi?
Umthi, uMlilo, uMhlaba, iMetri kunye naManzi zizinto ezi-5 zokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseTshayina. Fumanisa ifuthe labo kumqondiso wakho kunye nobuntu bakho.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kweNtshona kunezinto ezi-4 ezihambelana ngokuhambelana kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseTshayina kwelinye icala kunezinto ezi-5 ezinamandla azo ziyahambelana. Kweli candelo lithile lokuvumisa ngeenkwenkwezi, sibhekisa kwi-Wood, Fire, Metal, Water nakuMhlaba kwaye nganye nganye inxulunyaniswa nomqondiso apho ivuselela kwaye inefuthe khona. Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masifumanise ifuthe abanalo kuwe, kubuntu bakho nakwindlela yakho yobomi.
Yiyiphi impembelelo enayo?
Ukutya kwengqondo: Iinkuni zondla uMlilo, ochumisa uMhlaba, ovelisa iMetali, otyebisa aManzi wona othe wondla uMthi. Inqaku ngalinye lidityanisiwe, linegalelo kwimpilo-ntle yabanye kwaye linempembelelo kubuntu bomqondiso wakho waseTshayina ngokobunjani bamandla alo.
Ngaba ndiliphi iqela leqela?
Akukho nto inokuba lula njengokusebenza kweqela lakho. Into nganye inxulunyaniswa ne inani, elidityaniswe kwi unyaka wokuzalwa kwakho. Umzekelo:
Unyaka wakho wokuzalwa uphela ngo 0 okanye 1: ungu Isinyithi
Unyaka wakho wokuzalwa uphela ngo 2 okanye 3: ungu Amanzi
Unyaka wakho wokuzalwa uphela ngo 4 okanye 5: ungu Umthi
Unyaka wakho wokuzalwa uphela ngo 6 okanye 7: ungu Umlilo
Unyaka wakho wokuzalwa uphela ngo 8 okanye 9: ungu Umhlaba
> Funda i-horoscope yakho yaseTshayina 2021 apha!<
Inxalenye yokubala komoya
Izinto zaseTshayina kunye nefuthe lazo kuthi
Ngamazwi amathathu Iqhayiya, ulungile, uzimisele
Umbala odibeneyo mhlophe
Inqaku elibuthathaka Amaphaphu
Kuthatha amandla ukuze yonke iminqweno yakho izaliseke! Ubeka yonke into endaweni ukuze ufezekise iinjongo ozibekele zona. Ukuyeka kuhamba ngaphandle kombuzo kuwe! Nokuba injani na imeko, uhlala unyanisekile kwimilinganiselo yakho kwaye ungazivumeli ukuba uphenjelelwe nangayiphi na indlela. Lumka, kuba ubungqongqo buba sisiphene xa bujika buba buburhabaxa ...
I-taurus horoscope uthando lomdlalo
Ngokomsebenzi, unobunzima ekunikezeleni, kodwa ayizukulimaza. Ithuba lakho elincinci Ingqondo inokuxhamla ngokuvula, njengoko ukungqubana kwezimvo ezahlukileyo kuya kuyiphucula imbono yakho.
Uthando olucinezelweyo, ucinga uthando kodwa ungaluvumeli ngenxa yokoyika ukubonakala usengozini ... Uyayazi indlela yokutyhila kwaye gqamisa iitalente zeqabane lakho. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba xa sele usekukhanyeni, iqabane lakho alikusibekeli kakhulu!
Ngamazwi amathathu Ndineentloni, uvakalelo, novelwano
Umbala odibeneyo Mnyama
Inqaku elibuthathaka Izintso
Uyayazi indlela yokunxibelelana nokwakha ubudlelwane ngokukhawuleza ukubangela ukuthembana nokuzithemba. Yintoni enokuba yinto eqhelekileyo kuwe ngaphandle kokumamela abanye? Ukujonga kakhulu, intuition yakho ayikaze iphosakele kwaye ikuvumela ukuba wazi ukuba ujongene nabani. Ukuba ubungenazintloni kwaye ungazithembi, iimpembelelo zakho bezingathintelekanga!
Ukudlala kwizithunzi kumnandi ngakumbi kunokukhokela iqela. Ngaphandle koko, imali ayisiyiyo eyokuqhuba. Umnqweno wakho kukuphumelela ebomini.
Uqala ngenkolelo yokuba unobomi obunye kuphela kwaye uzinikezela obakho kwabo bakungqongileyo. Usapho lwakho kunye neqabane lakho liza kuqala!
Ngamazwi amathathu Ubuchule, amabhongo, iintliziyo ezishushu
Umbala odibeneyo Luhlaza
Inqaku elibuthathaka Isibindi
Ukuthabatha inyathelo lokuqala? Uyayazi indlela yokwenza! Awusoze ufutshane ngezimvo okanye amandla. Inkuthazo engakholelekiyo inokuvakala kwindlela oqhuba ngayo zonke iiprojekthi. Wena, ukukhukhumala? Hayi, nje amabhongo. Uyayazi indlela yokwenza ungqongwe ngabantu abalungileyo kwaye ukufumana ukuthembela kwabo bawela indlela yakho kukudlala komntwana kuba unovelwano kakhulu.
Amandla akho awaziwayo ahamba nawe kwiofisi yakho! Amaqela, imisebenzi kunye nemali, ulawula yonke into ngokuqaqambileyo.
Thatha ixesha zitshaja kwakhona iibhetri zakho neqabane lakho, awuyi kuzisola ngobushushu obuthuthuzelayo beengalo zabo ... Ngaphambi kokuba uphinde uhambe ngesitayile!
ndingalifumana inani 9
Ngamazwi amathathu Ukuzithemba, ukungabi namonde, ubukrelekrele
Umbala odibeneyo Inethi
Inqaku elibuthathaka Intliziyo
Ukuba yinto yomlilo, ushushubeza umoya, uvuselele amandla kunye Uyayazi indlela yokugcina idangatye lomnqweno liphila. Upopayiwe ngumdla wekamva kunye nomnqweno onamandla wokufuna ukwazi, ufuna ukubona kwaye ufunde yonke into. Ukulawula kunye nokuqaqamba ziyinxalenye yeminqweno yakho, kodwa lumka ungahambi kwizinto zodwa. Funda ukulunga kwentobeko kwaye uhlale ujonge iimfuno zakho.
Kufuneka kuthiwe uyayazi indlela yokukhuthaza imikhosi yakho! Uyayazi indlela yokwenza ukuba basebenze nzima. Kulumkele ukuzithemba ngokugqithiseleyo ngamanye amaxesha oko kukhokelela ekubeni wenze ngokungacinganga, ngomnwe wokuzingca.
Iimpawu ze-zodiac kunye nobuntu
Ibhalansi yeyona nto ikhanya kakhulu kubuntu bakho. Thanda ukutshintshiselana kwexesha elide. Ubushushu bothando bungcono kunomlilo wenkanuko!
Ngamazwi amathathu U-Lucid, uyacinga, uzolile
Umbala odibeneyo Lubhelu
Inqaku elibuthathaka Udaka
Ukonwabela? Awunaxesha lalonto. Ngqongqo kunye noqeqesho, ukuqonda kwakho okusebenzayo kukufumana kanye kwinqanaba. Kuwe, akukho ngxaki, kuphela isisombululo. Ulumkile kwaye izivamvo zakho zibukhali kakhulu ... Kwanele ukufikelela kwiinjongo zakho ngokuqinisekileyo!
Nangona ubume bakho bukwenza ukuthanda kwakho, ukuswela kwakho ukucinga uhlala ethanda ukumisela umda kwicandelo lezenzo. Emsebenzini nasebomini, ungathanda ukuyidlala ikhuselekile kunokungcakaza ngethamsanqa.
Kubudlelwane, uhlala usiya kwindawo eyaziwayo emva kokuvavanya iimvakalelo zeqabane lakho. Ulwalamano lwakho alunakusebenza ngaphandle kokuthembana, ukunyaniseka nokuthembeka. Isiqhelo asikoyikisi, Ngokuchaseneyo ufumana intuthuzelo enkulu kuyo ... Kodwa awulibali ukuvuselela intlantsi xa ifuneka!
Usetyenziso lweeMpawu zeZodiac ezinokuthi ziphele zodwa
ukubaluleka kokomoya kwe-5
uyithanda njani indoda yanamhlanje
yeyiphi iplanethi ekubuyiseleni ngokutsha ngoku i-2019
ii-pisces kunye ne-sagittarius ziyahambelana